"Jaalala Laga nan Ceesifne Siwaliin Eegaleen Bishaan na Nyaate!" - Xalayaa Jaalalaa
“Jaalala Laga nan Ceesifne Siwaliin Eegaleen Bishaan na Nyaate!”
27 Feb 2017 Kan maxxanse Naa'ol
“Laftii abdatan sanyii nyaata, namnii abdatan waada nyaata” jedha mitii ree Oromoon. Wa’ee kee dubbii nan dhiisa yoon jedhu, sammuun koo na dirqisiisa. Kan atii narrattii raawwatte yoomuma keessa kooti hin badu. Godaanisa sammuu koo kan dhiba ntaanen suphame, waraansa dhiiga hin buufne, waraantu hin agartu, arraba kee sobduu sanaan akka duumessa lafa gannaa na goolgite. “Anaaf ati, haalli nuu miijatuus miijachuu baatus haalli addan nuun baasu” nan jecha turte. “Nutii daawwitii waliiti, kan midhaaginaaf fokkisumma keenya keessatti of ilaallannu dha. Anii kan keeti atiis kan kooti, godoo jaalalaa onnee koo keessattii ijaaratteerta, onnee koo keessa bara jireenyya koo guutu jiraatta, sirraa homtuu nan fudhatuu!” nan jechaa turtee.
Dirribee gaafa atii gara Kuweeti imaltuu boo’ichaafi gadda guyyaa du’aa caalu walittii maraanne imimmaanin fuula keenyan dhiqaa nagaan walittii dhaamanne adda baane. Edaa atii jaalala sobaa nafaana jiraachaa turtee? Dhugaa waaqati anaaf ati adda baana jedhee guyyaa tokkoof illee yaade hin beeku. Wa’ee keef bara jireenya koo guutu nan gadda. Sababa keerra kan ka’ee dubarttii martii sifakkaatani nattii mul’atu.
Himmm!! Atii gaaru nama miidhagina keetin akka shakataa gabaa mara irraa naannoftee of dallaaltu dha!
Dirribee meequma baasta laata? Maal atii namnii safuu waaqattii hir’ate. Oromoon safuu qaba. Waan dubbatees waada saani eega. Nama imaana nyaate dhoksu garuu siinan arge. Akka qilleenssa muka raasu kallattii afranittu raafamta.
Hiiimmmm!!! Wa’ee keetif jechan dhaba. Maalan godha? Yoo fiigi sin jedhan fiigda murannoo hin qabu keessi kee. Kuniis dhugaa dha! Atii lafa kanarra umrii hammam jiraatta? Maaluma ta’a amala saree maraate kana gattee nama tokko faana yoo jiraatte? Waanti na diinqu keessa inni tokko, ati amantii kee meequma? Yoo kakattu, nama garaagara bira yoo deemtu, “Wallaahi”, “Kriistoos” maqaan taabota tokkos hin hafuu. Amala akkasii qabda.
Maaloo Dirribee nama yoo sodaachu baatte waaquma uuma kee isa gadameessa haadha kee keessatti si tolche si guddisee har’an siga’e sodaadhu! Atii dhala namaatti maaf taphatta? Guyyaa tokko waaqni hojii kee sigaafata. Waaqaf salphaa dha.
Garuu, kan nagubu keessa inni tokko. Anii bilbila keerratti bilbillaan nama biraatti kennitee waan garasaa nan jedhe. Amma immo gara biyyattii deebitee dhiira biraa qabattee dhokattee teessa. Haa ta’uu malee atii na dhokattuus garaan jaalalaa taa’i fi ka’ii nawallaalchise jennaan, bilbila kee boolla meeqa seeneen argadhe. Isa booda sii bilbilee sagalee kee isa durii sana daga’e, nan nahe! Miilli koo naaf dhaabbachu didee ofirran gadii taa’e. Qaamonni miira koo nahoollatani. Dhahannaa onne kooti daran dabalee hafuura nadhoorke. Erga sii bilbilee raawwadhes saati tokkof eenyummaa koo wallaale. Nan boo’e!
Uuuff! Hiriyoota koo warra sibeekan fi kan nabeekaniitan bilbile. Amanuu dadhabnaan tasgabba’ii nan jedhan. Garuu, tasgabba’uu hin dandeenye. Dhagaan samiitti ol darbameetu samii keessattii hafee. Balleessa koo malee na gantte na dagatte. Seenaa nama hin irraanfatamne irraanfattee.
Wa’ee kootiif nan gadda. Qalbii dhan cabeera. Hir’inna qalbii kootiifis kabaja dhabeera. Jaalala laga nan ceesifne siwaliin eegaleen bishaan na nyaate. Daa’imumma kootin sijaaladhe. Mar’immaan koo nabobeesite. Garaan jaalala ciiseen buluu narakkisaa jira. Mee qalbii kee jijjiiradhu. Har’a sin barbaada. Qarshiin ni dhuma jaalalli dhugaa garuu cirracha laga Abbayyaati. Osoo sijaaladhus akkan sijaaladhu osoo beektu naan gargar bahuu maalif filattee?
Maaloo anoo siif gubadheerati dafii garakoo naaf deebi’ii.
Jaalallee kee kan ture Birriisaa Hangaasuuti. Magaala Amboorra kan siif barreese. Jaalallee koo kan Finfinnee keessatti dhokatee jiraatu Dirribee Dabaleef.
Anii garuu sin jaaladha. Nagaatti giftii koo.
Seenaa tiyyaa akkami fayyaa keetii dha bayy’ee tokkoo sini jalalaa dja garuu ijaa kootii isin harguu jiraa hin dandeenye ofi keetii nagatee biyyaa bahate jirtaa ofii kootii garuu sini barbadee isini dhabee jiraa
Jalalan Laga Hin Ceinaa